पl रि ताl माङको हेर्नै नl सकिने भिडियो साl र्बजनिक एl क्लै हेर्नुहोस। – Sidha Post 24
यो समाचारको भिडियो अन्तिममा छ कृपया पूरा हेर्नुहोला। त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो । म पहिलो पटक कुनै पुरुषको अँगालोमा बाँधिनु पर्ने थियो । बिहेअघि नै मैले यो रातको बारेमा नजिकका साथीहरूसँग कुरा गरेकी थिएँ ।
एकाङ्की जीवनका कारण कहिले काहीँ मेरो मन साह्रै दु’ख्थ्यो पनि ।अनि कसैको मायाका लागि त’ड्पिन्थ्यो पनि । तर, मेरा वरिपरि एकान्त बाहेक केही थिएन । कहिले काहीँ लाग्थ्यो, यी सबै दुखका पछाडि कतै म मोटी हुनु त कारण छैन ? के पुरुषले मोटी महिलालाई मन पराउँदैनन् ?
जब म ३५ की भएँ, ४० कटिसकेका एक जना पुरुष मसँग विवाह गर्न राजी भए । हाम्रो कुरो छिन्ने दिन मैले ऊसँग आफ्ना सारा भावना पोखेँ तर उसले मेरा कुरालाई वास्तै गरेन उ केही अ’त्तालिए झैँ देखिन्थ्यो तथा आँखाले एकटक भुइँ हेरिरहेका थिए र बेला बेलामा टाउको कन्याउँदै चुपचाप बसिरहेको थियो ।
मैले सोचेँ पुरुषहरू महिलाभन्दा अलि कमै बोल्ने हुन्छन् । शालीन हुन्छन् ।अनि मलाई लाग्यो, मेरो हुनेवाला पति पनि त्यस्तै होलान् । तर, बिहे भएको पहिलो रातमा म द्वि’विधामा परेँ तथा मैले थाहा पाउन सकिनपूरा भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस !
चोखो भन्ने केही रहेन त’पाईं यो भि’डियो हेरेर के भन्नु*हुन्छ…..भिडियाे हेर्नु*हाेस।